Chinja maApple Watch metric ekudzidzira kumba | Ndinobva mac
Chinja Apple Watch metric yekushandira pamba
Mumazuva ano ekuvharirwa kumba zvinonetsa chaizvo kuvhara madenderedzwa matatu anokurudzirwa neApple Watch. Zvisinei zvakakosha kuti urambe wakagwinya mazuva ano. Kwete zvese zvichave Apple TV + kana Disney +. Tichakudzidzisa maitiro ekugadzirisa wachi kuitira kuti metric yemitambo yatinoita kumba, iri kuyerwa nenzira inoshanda kwazvo inogoneka.
Zano. Usaita usimbe paunosimuka. Zviite sekunge raive zuva rakajairika. Simuka utore kufamba awa imwe neimwe, kukubatsira iwe nekushandisa kwekufema, kuzorodza mweya yako uye kuve wakadzikama.
Metric paApple Tarisa yeImukati Workout
Kazhinji iwo masikirini anoratidzwa neApple Watch anotarisana nehupenyu hunoshanda kunze kwenyika. Iyo inotiratidza isu anoshanda macalorie panguva yekufamba kana avhareji kumhanya. Aya metric anogona kunge akafanana zvakafanana izvozvi. Saka ngatizvigadzirise kuita kuti ive inobereka sezvinobvira.
Sezvauchaona mumufananidzo uyu, unogona kusarudza kuratidza mametric akati wandei zvichienderana nebasa riri pahwindo rewachi. Asi kana isu tikasarudza, semuenzaniso, kufamba mukati, tinogona kusarudza kuti ndeapi masikirini ekuratidza, uku kurovedza kuri kuitwa. Kana iwe ukatsikirira kumusoro kurudyi, kwazvinoti edit, unogona kusarudza zvekuratidza pane wachi.
Unogona kusada kuratidzwa kurova kwemoyo wako, sezvo kumba zvakaoma kuti moyo wako ukwire pamusoro pemabheti ako nekufamba pasi. Asi kana iyo daro. Mumwe mutambo kuti uzvichengete iwe uchifadzwa uye unoshanda ndeyekuvandudza danda rako zvishoma zuva rega rega.
Unogona kunyange kusarudza izvozvo metric imwe chete inoratidzwa. Nenzira iyi iwe unogona kutarisa kune imwechete paramende. Asi chakakosha ndechekuti isu tigare tichishingaira uye mune iyo Apple Watch chiitiko. Ndiani ave kuda kusvika kunetsa uyu Kurume?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chinja Apple Watch metric yekushandira pamba
Apple inopa chaiwo zvemukati zvemhuri yakavharirwa
Mapfupiso ekhibhodi yekodhi yeApple Mabhuku eApple